အဆီပြန်ပြီး ဝက်ခြံထွက်လွယ်သူတွေ အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ – YANGON STYLE
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေဆိုတာ အမြဲတမ်းလိုလိုစေးကပ်ကပ် ဖြစ်ပြီး အဆီတွေနဲ့ ပြောင်နေမယ် ၊ ချွေးပေါက်တွေ သိသိသာသာ ကျယ်နေမယ် ၊ နူးညံ့မှုမရှိပဲ အသားအရေက ထူထူကြမ်းကြမ်းကြီး ဖြစ်နေမယ် ၊ မကြာခဏ ဆားဝက်ခြံ ၊ အဆီဖုနဲ့ ဝက်ခြံတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ ဖြစ်နေပါပြီ ။
အဆီပြန်စေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းကတော့ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်ပြီး ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ နှင့် စိတ်ဖိစီးမှု အရမ်းများရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်
အဆီပြန်တဲ့အသားအရေဆိုတာ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် ဖြစ်တာမို့ ကာကွယ်ရခက်ပေမဲ့ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းကတော့ မှန်ကန်တဲ့ skin care steps တွေကို မပျက်မကွက် ပုံမှန် လုပ်ပေးပြီး မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ရေဓာတ်ပြည့်ဝအောင် ၊ အာဟာရမျှတအောင် စားသောက်နေထိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ ကတော့
1. မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် ပုံမှန်မျက်နှာသစ်ပေးပါ။
2. အသားအရေကို ခြောက်သွားစေတဲ့ ဆပ်ပြာမျိုးထက် Gentle Cleanser ကိုသာရွေးချယ်သုံးပေးပါ။
3. Skin Care တွေရွေးချယ်တဲ့ အခါမှာလဲ Oil-Alcohol-free, water-based, non-comedogenic အစရှိတဲ့ ရေဓာတ်ကိုပဲ အခြေခံပြီး ထုတ်ထားတဲ့ products တွေကိုရွေးချယ် သုံးပေးပါ။
4. အပြင်သွားတဲ့ အခါမှာ Sunscreen လိမ်းပေးပါ။
5. အဆီစုပ်တဲ့ စက္ကူလေးတွေ သုံးပေးခြင်းကလဲ အဆီပြန်ချင်းကို မကာကွယ်နိုင်ပေမဲ့ မျက်နှာမှာ အဆီတွေနဲ့ ပြောင်နေတာကိုတော့ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။
6. အဆီပြန်လို့ ဆိုပြီး ခဏခဏ မျက်နှာသစ်တာ၊ချွေးပေါက်တွေ ပွင့်စေပြီး ဆဲလ်အသေတွေ ဖယ်ရှားပေးတဲ့ exfoliator နှင့် face scrub တွေ လိုအပ်တာထက် ပိုသုံးတာမျိုးတွေ ရှောင်ပေးပါ။
7. အပြင်က ပြန်လာပြီး မိတ်ကပ်တွေ မဖျက်ပဲ အိပ်ရာမဝင်ပါနှင့်။
8. အစားအသောက် အနေနဲ့ကတော့ ဆီကြော်တွေ ၊ အချိုဓာတ် ၊ အငံဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေ အလွန်အကျွံမစားပါနှင့်။
9. သခွါးသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ သံပယိုသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ထောပတ်သီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ အုန်းစိမ်းရည် အစရှိတဲ့ အသီးအနှံတွေ နဲ့ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးအနှံတွေ စားပေးပါ။
10. Omega-3 fatty acid ပါတဲ့ nuts တွေ နဲ့ ငါးအမျိုးမျိုး စားပေးပါ။